Headphone & daaraa Case
Waa maxay habka ee ka shaqeeya kiis kartoo?
waqti Post: May-27-2017
Keenida nolosha fikrad noqon kartaa yara xad-dhaaf ah, oo macneheedu halkaas oo aanu ku iman. Geedi socodka Our bilaabataa design. Iyadoo in ka badan 15 sano oo khibrad ah marka la isku daro waxaan ka leexin kara fikrad kasta oo dhab ah. Kooxdayada design khibrad qorshee doonaa kiis si buuxda caadadii in uu la kulmo baahida dalabka kasta oo gaar ah u baahan yihiin ...Read more »
Waa maxay faa'iidooyinka aad hesho si aad u isticmaasho a doorsoon cimlibaadhista Case?
Haddii aad qabtid qalabka jilicsan ama alaabtii xasaasi ah oo u baahan badbaado, kiis cimlibaadhista thermoformed waa xal fiican. Sababo la xiriira waxa ee cimri dherer iyo rigidity, kiisaska cimlibaadhista bixiyaan kale kaamil ah kiisaska caag adag, oo aan ku allabaryaya waa guryaha ilaaliya. Our dukumiintiyo lahaansho ...Read more »
Sidee Beyond Case sameeyo nidaamka tayada ay?
Waxaan ku faanaa on rating 100% ku qanacsan ka macaamiisheena. heerarka tayada ay jariiradu waa qayb weyn ku sumcad our hogaamiyaha warshadaha ah ee design iyo wax soo saarka kiiska caadadii. Waxaan si buuxda u go'an in ay aad maraakiibta amar iin-free. Dhab ahaantii, hadii aan helno mid defe ...Read more »
Beyond Case waa lammaane ugu kalsoonaan karo, waayo, kartoo cimlibaadhista Case
Haddii aad la haysta waqti adag helo cimlibaadhista (ethylene copolymer vinylalkohol) alaabta, noloshaada uun helay fudud. At Beyond Case, waxaad ka heli doontaa wax cajiib ah tan gudaha oo dhan ee alaabta xaaladaha kartoo iyo in badan oo ka mid ah xaaladaha OEM caadadii our. Fresh, cayishay & horyalka Talyaaniga Iyada oo ay texture ka jilicsanaayeen, greate ...Read more »
Cinwaanka: Shanghai Beyond Case Co., Ltd.